ch 12 မာကု – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch 12 မာကု
12:3 ဒါပေမယ့်သူတို့, having apprehended him, beat him and sent him away empty.
12:4 တဖန်တုံ, he sent another servant to them. And they wounded him on the head, and they treated him with contempt.
12:5 တဖန်တုံ, he sent another, and him they killed, နှင့်အခြားသော: some they beat, but others they killed.
12:6 ထို့ကြောင့်, having still one son, most dear to him, he sent him also to them, အလွန်အဆုံးမှာ, ဟုဆို, ‘For they will reverence my son.’
12:7 But the settlers said one to another: ‘This is the heir. လာ, let us kill him. And then the inheritance will be ours.’
12:9 ထို့ကြောင့်, what will the lord of the vineyard do?” “He will come and destroy the settlers. And he will give the vineyard to others.”
12:10 "ဆိုတော့, have you not read this scripture?: ‘The stone which the builders have rejected, the same has been made the head of the corner.
12:11 သခင်ဘုရားအားဖြင့်ဤအမှုကိုပြုသောထားပြီး, and it is wondrous in our eyes.’ ”
12:12 And they sought to take hold of him, but they feared the crowd. For they knew that he had spoken this parable about them. And leaving him behind, သူတို့သှားကွ၏.
12:14 And these, ရောက်ရှိလာ, သူ့ကိုကပြောပါတယ်: "အရှင်ဘုရား, we know that you are truthful and that you do not favor anyone; for you do not consider the appearance of men, but you teach the way of God in truth. Is it lawful to give the tribute to Caesar, or should we not give it?"
12:15 And knowing their skill in deception, သူတို့ပြောဆို: “Why do you test me? Bring meadenarius, so that I may see it.”
12:16 And they brought it to him. ထိုသူတို့အားဆို၏, “Whose image and inscription is this?"သူတို့ကသူ့ကိုအားဆို၏, “Caesar’s.”
12:17 So in response, ယေရှုက, “Then render to Caesar, the things that are of Caesar; ဘုရားသခငျသညျမှ, the things that are of God.” And they wondered over him.
12:18 And the Sadducees, who say there is no resurrection, approached him. ထိုသူတို့ကသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်, ဟုဆို:
12:19 "အရှင်ဘုရား, Moses wrote for us that if any man’s brother will have died and left behindawife, and not have left behind sons, his brother should take his wife to himself and should raise up offspring for his brother.
12:20 သို့ဖြစ်., there were seven brothers. And the first tookawife, and he died without leaving behind offspring.
12:21 And the second took her, သော်သေလေ၏. And neither did he leave behind offspring. And the third acted similarly.
12:23 ထို့ကြောင့်, in the resurrection, when they will rise again, to which of them will she beawife? For each of the seven had her as wife.”
12:26 But concerning the dead who rise again, have you not read in the book of Moses, how God spoke to him from the bush, ဟုဆို: ‘I am the God of Abraham, နှင့်ဣဇာက်၏ဘုရားသခငျ, and the God of Jacob?''
12:27 He is not the God of the dead, but of the living. ထို့ကြောင့်, you have gone far astray.”
12:28 And one of the scribes, who had heard them arguing, သူ့ကိုချဉ်း ကပ်.. And seeing that he had answered them well, he questioned him as to which was the first commandment of all.
12:29 And Jesus answered him: “For the first commandment of all is this: ‘Listen, အိုဣသရေလအမျိုး. The Lord your God is one God.
12:30 And you shall love the Lord your God from your whole heart, နှင့်သင့်တပြင်လုံးကိုအသက်ဝိညာဉ်ကိုအထဲက, and from your whole mind, and from your whole strength. This is the first commandment.’
12:32 And the scribe said to him: Well said, အရှင်ဘုရား. You have spoken the truth that there is one God, နှင့်မျှမကအခြားသူ့ကိုအနားမှာရှိ;
12:34 ထိုအခါယရှေု, seeing that he had responded wisely, သူ့ကိုကပြောပါတယ်, “You are not far from the kingdom of God.” And after that, no one dared to question him.
12:37 ထို့ကြောင့်, David himself calls him Lord, and so how can he be his son?” Andagreat multitude listened to him willingly.
12:38 သူသည်မိမိဒေသနာ၌ထိုသူတို့အားပြောဆို: "ကျမ်းပြုဆရာသတိပြုပါ, အဘယ်သူသည်ရှည်လျားသင်္ကန်းအတွက်လမ်းလျှောက်ဖို့ပိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်ဈေး၌ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခံရဖို့,
12:39 နှင့်တရားစရပ်၌ပထမဦးဆုံးကုလားထိုင်၌ထိုင်ဖို့, နှင့်ပွဲတော်များမှာပထမဦးဆုံးထိုင်ခုံရှိသည်ဖို့,
12:40 ရှည်လျားသောပဌနာ၏ဟန်ဆောင်မှုအောကျတှငျမုတ်ဆိုးမတို့ကို၏အိမ်များတို့ကိုလောင်စေတဲ့သူ. ဤရွေ့ကား ပို. ကျယ်ပြန့်စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်။ "
12:41 ထိုအခါယရှေု, ထို offertory box ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ထိုင်လျက်, လူအစုအဝေးတို့သည် offertory သို့ဒင်္ဂါးကိုသွန်းလေ၏သောလမျးစဉ်းစား, အလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်အတွက်ချမ်းသာကြွယ်ဝသွန်းနှင့်များစွာကို.
12:42 သို့သော်တဦးတည်းဆင်းရဲသောမုတ်ဆိုးမရောက်ရှိခဲ့ပြီးပြီးမှ, သူမငယ်နှစ်ဒင်္ဂါးပြားကိုသွင်းချ, လေးပုံတပုံရသောဖြစ်ပါသည်.
12:43 နှင့်သူ၏တပည့်တို့သည်အတူတောင်းဆိုထားတဲ့, သူတို့ပြောဆို: "အာငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, ထိုဆင်းရဲသောမုတ်ဆိုးမတယောက်ကို offertory မှလှူဒါန်းခဲ့သောသူအပေါင်းထက် သာ. သွင်းချပြီ.
12:44 ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်ထဲကနေပေးတော်မူသည်, သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, သူမကသူမ၏ရှားပါးမှုကနေပေး၏, ပင်လုံးကိုသူမခဲ့, သူမ၏တစျခုလုံးကိုလူနေမှု။ "